စားသုံးသူ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး - Kanbawza Tai News
Home ဆောင်းပါး စားသုံးသူ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး
စားသုံးသူ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး
October 21, 2019 ဆောင်းပါး,
အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့ကို ကမ္ဘာ့ဆရာ များနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ဆရာများကို ဂုဏ်ပြုကျင်းပကြသည်။ ထိုဂုဏ်ပြုပွဲကို အာစ ရိယဂုဏ်ပြုပွဲများ တစ်ပြိုင်နက်ထည့်သွင်း ကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။ တစ်ရက်တွင်ထိုကျင်း ပနေသည့် အခမ်းအနားမှ တက်ရောက်နေ သည့် ဆရာ တစ်ဦးနှင့် ဆုံမိသည်။ သူ၏ ဖုန်းဘက်ထရီ လာပြင်ရန်နှင့် လိုအပ်ပါက ဘက်ထရီအသစ်လဲခြင်း အကြောင်းပြောရင်း ဆိုင်ရှင်ထံမှမျက်နှာလွဲရင်း ကျွန်တော့်ကိုပြုံးပြ နှုတ်ဆက်သည်။ ကျွန်တော်လည်းပြန်နှုတ် ဆက်ရင်း စောစောကပင်ပြီးစီးသွားသည့် ဖုန်း ကိုကောက်ထည့်ရင်း ဆရာနှင့်စကားဆိုမိ သည်။ အမှန်တကယ်တော့ သူပြောနေတာကို နားထောင်ပေးရခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကိုယ့်တာ ဝန်မှှာ ဟုတ်ကဲ့တစ်ခွန်းသာ လိုက်ပေးရခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ့စကားများသည်ရှည်လျားသော် လည်း ညည်းငွေ့စရာတစ်လုံးတလေမှမပါခြင်း ကြောင့် သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရမည်။ သူ့စကား များကိုအနှစ်ချုပ်ရသော် အစားအစာများထဲ တွင် အာဟာရဓာတ်နှင့် အန္တရာယ်များကိုသိိရှိ ထားပြီး ဂရုတစိုက်စားသုံးဖို့လိုအပ်ကြောင်း နှင့် ရောင်းပန်းလှအောင်ဓာတုုဆေးဝါးများ အ သုံးပြုထားသည့် စားသုံးကုန်ပစ္စည်းများကို သ တိထားရှောင်ကြဉ်ရန်လိုကြောင်းတို့ပါဝင် သည်။
မြန်မာပြည်တွင် ဆန်တန်ချိန် ၁၀ သန်း ကျော်ထွက်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် တန်ချိန် ၁၀ သန်းထွက်ပါသည်။ သို့သော်တန်ချိန် ၅ သန်းကို နိုင်ငံခြားသို့ပို့သည်။ ကျွန်တော်တို့ သည် တစ်နှစ်ဆန်တန်ချိန် ၉ သန်းစားသည်။ တစ်သန်းကိုသာနိုင်ငံခြားသို့ပို့နိုင်သည်။ မြန် မာတို့သည် ထမင်းကိုအခြေခံစားသုံးတဲ့သူများ ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းလိုလို အလာပသလ္လာပ ပြောသည့်အခါ နှုတ်ဆက်ကြသည့်အခါ "ထ မင်းစားပြီးပြီလား" ဟုသာမေးလေ့ရှိပါသည်။ ဆန်ကိုဂျပန်၊ ဟောင်ကောင်၊ စင်္ကာပူ၊ သီရိ လင်္ကာနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှာလည်းစားကြ သည်။ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ လာအိုတို့ မှာလည်း ဆန်ကို စားကြ သည်။ သို့သော် ထမင်းရည် ငှဲ့ပြီး ချက်/မချက် တော့ စဉ်းစားရန် လိုသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် အိမ်ရှင်မများ လက်စွဲ ထမင်းပေါင်းအိုးများ သည် ထမင်းရေခန်းချက် ပေးသလို လူများ ဆီမှ အတုယူပြီး ချက်သင့်သည်။ မည်မျှ ခက် ခဲသည့် အလုပ် မဟုတ်ပါ။
ငါးပိသည် မြန်မာ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ် သည်။ ရေကျိုငါးပိဖြစ်စေ၊ မျှင်ငါးပိဖြစ်စေ ပရို တင်းပါသည်။ ထို့အပြင်သတ္တုဓာတ်များလည်း ပါပါသည်။ အထူးသဖြင့်ရေကျိုငါးပိများကို ပြု လုပ်ရာတွင် ဓာတ်မြေသြဇာထည့်ကြတယ်လို့ ပြောကြသော်လည်း ဤသတင်းသည်အတည် မပြုနို်င်ပါ။ အဘယ််ကြောင့်ဆိုသော် ငါးပိထဲ တွင် မူလကပင် urea ဓာတ် ပါဝင်နေခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ဒီ urea သည် အန္တရာယ်မရှိပါ။ သို့သော်ငါးပိများလျှင်တော့ သွေးတိုးရောဂါရတတ်သည်ကို သတိထားရန် လိုပါသည်။ မျှင်ငါးပိကို စိမ်းစားငါးပိစသဖြင့် အမျိုးမျိုးခေါ်ပါသည်။ ဤငါးပိသည် အရောင် မည်းလာလျှင်ရောင်းပန်းမလှတော့ပါ။ ထို့ ကြောင့် ချည်ဆိုးဆေးနှင့် အလားတူဆိုးဆေး များကို သုံးကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုဆိုး ဆေးများသည် အန္တရာယ်ကြီးသည်ကို သိရ သည်ဟုဆိုပါသည်။ ဆိုးဆေးတွေပါဝင်သည့် အစားအစာများကို ကလေးငယ်များမစားဖြစ် အောင် ဂရုစိုက်ကြပ်မတ်သင့်ပါသည်။
တကယ်တော့ ဆိုးဆေးကို ကြပ်မတ်ရာ တွင် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်သည့် နေရာကိုအဓိက စစ်ဆေးရန်လိုပါသည်။ စားသောက်ကုန်ထုတ် သည့်နေရာများတွင် ဆိုးဆေးများ၊ ဖော်မလင် များအသုံးပြုခြင်းရှိမရှိကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လို အပ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများကို ပညာပေး စည်းရုံးသင့်ပါသည်။
Ethephon ဆိုသည့်ဓာတုပစ္စည်း (2 chlo roethyl phosphoric acid)ကိုမူလကပိုးသတ် ဆေးအနေဖြင့် ထုတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အပွင့် အသီးများကို နောက်ပိုင်းတွင်ကြီးထွားစေမှန်း တောင်သူများသိလာခဲ့သည်။ ဤဆေးကိုဝါ ဆွတ်သည့်အခါ လွယ်ကူအောင်သုံးခဲ့သည်။ ဝါသီးအာအောင်စောင့်ပြီး ဝါဆွတ်လျှင်အဆင် မပြေပါ။ ထို့ကြောင့်ဝါသီးများ တစ်ချိန်တည်း အာလာရန် ဤဆေးကိုသုံးကြခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်ကုန်လူပန်းသက်သာခြင်း ဖြစ်စေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံက ဝါခင်းများအတွက် သုံးကြ သော်လည်း မလေးရှား၊ အိန္ဒိယတို့သည် ရာ ဘာပင်များသုံးကြသည်။ အရွက်တွေကို ဆေး ဖျန်းသလိုရော်ဘာခြစ်သည့် ဓါးတွင်သုတ်ပြီး ရော်ဘာခြစ်ကြသည်။ ထိုအခါ မူလထက်အဆ များစွာ ထွက်သည်ဟုဆိုသည်။ ဤဆေးသည် လူများနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရန် မသင့်လျော် ပါ။ ရော်ဘာစေးသည် အများကြီးအများကြီး ထွက်သည့်အတွက် အပင်တွေခဏလေးအ ရည်ခန်းသွားနိုင်သည်ဟုလည်း ဆိုပါသည်။
Ethphon ကို ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့ သည်။ ကနသီးကတော့ ပိုးသတ်ဆေးအနေ ဖြင့် ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် EPA နှင့် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ သည်။ Ethephon သည်သစ်ပင်အစိတ်အပိုင်း (အသီး၊ အရွက်၊ အပင်) တစ်ခုခုနှင့်ထိတွေ့ပြီး သည့်နောက် သူဟာအီသိုင်လင်းအဖြစ်ပြိုကွဲ သွားသည်။ အီသိုင်လင်းသည် အပင်တွေကြီး ထွားရင့်သန်မှုကို အားပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ဂျုံခင်း၊ ပြောင်းခင်း၊ စပါးခင်းတို့မှာပါ ပိုပြီးရင့် မှည့်စေရန်သုံးလေ့ရှိသည်။ ကော်ဖီခင်း၊ ဆေး ရွက်ကြီးစိုက်ခင်းများတွင် သုံးလေ့ရှိသည်။ နာ နတ်သီးများအတွက်လည်းအလွန်အသုံးဝင်သည်။
မြန်မာတောင်သူများသာမက မြန်မာ့ လက်လုပ်လက်စားများကပါ ထိုဆေးသုံးထား သည့် သီးနှံများကို မြိန်ရှက်စွာသုံးဆောင်မိကြ သည်။ မျက်စိတွင်မြင်ယောင်မိသည့် မြင်ကွင်း တစ်ခုမှာ ဇလုံကြီးထဲသို့ ဆေးမှုန့်အနည်းငယ် ထည့်လိုက်သည်။ ထိုရေထဲသို့ ငှက်ပျောသီး အစိမ်းများ အဖီးလိုက်နှစ်သည်။ အဖီးလိုက် ဆွဲထုတ်ပြီးချိတ်ထားလိုက်သည်။ နောက်တစ် ရက် ၂ ရက်အကြာတွင် ထိုငှက်ပျောသီးများ ဝင်းပြီးမှည့်လာတော့သည်။ ထိုအသီးများတွင် ငှက်ပျောသီးနုနုများလည်းပါသည်။ ငှက်ပျော သီးရဲ့ထောင့်များ ရှိနေသေးတဲ့အတွက် ဘယ် လိုအုပ်အုပ်မမှည့်နိုင်တော့ပါ။ ထိုငှက်ပျောသီး သည်ကပြသဖြင့် ထိုအထုပ်လေးကို တရုတ်စာ များရေးထားသည်ကိုသာ ဖတ်လိုက်ရသည်။ အဲ့ဒါကိုဘယ်မှာဝယ်သလဲလို့မေးကြည့်တော့ လယ်ယာသုံးပစ္စည်း ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်လို့ရသည် တစ်ရာဖိုး ၂ ရာဖိုးဝယ်လို့ရ သည်ဟုလည်း သိရသည်။ ယခုထိသိရသည် မှာ ထိုပစ္စည်းကြောင့်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သည့် အ ထောက်အထားမတွေ့ရသေးပါ။ ဒါကလည်း အတိအကျဟုမသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ မူလကပင် ပိုးသတ်ဆေးအနေဖြင့် သုံးရန်ဖြစ်သည်ကို သတိပြုရန်ဖြစ်သည်။
Ethephon သည် အသားအရည်ကိုယား ယံစေသည် မျက်စိကိုဒုက္ခပေးနို်င်သည်။ ထို့ ကြောင့်လက်အိတ်နဲ့သုံးရန်၊ ဆေးဖျန်းသူများ သည် အကာအကွယ်မျက်မှန်တပ်ဖို့ ညွှန်ကြား ထားပါသည်။ ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရမလိုပင် ယနေ့ကာလအထိ သုံးစွဲလာသည့်နှစ်ပေါင်း ၄၀ အတွင်းမှာ အသားအရည်ယားယံခြင်းနှင့် မျက်စိယားယံသည့် ပြဿနာကိုသာ တွေ့ခဲ့ရ သည်ဟု အစီရင်ခံစာတစ်စောင်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
အစားအသောက်တွေ၏အန္တရာယ်ကို ဂရု စိုက်သည်ဟုဆိုပါက မိမိတို့၏စားသောက်ခြင်း ကို အကျိုးရှိအောင် ဂရုတစိုက်စားသောက်ဖို့ ရန် အရေးကြီးသည်။ မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးဖို့ရန် နှင့် အလွန်အကျွံမသုံးရန် အရေးကြီးသည်။ အချိုမှုန့်လို့ ခေါ်နေသည့် msg သည်လည်း အလွန်အကျွံ မသုံးပါကပြဿနာ မရှိနိုင်ပါ။ ဓာ တုဗေဒပစ္စည်းတချို့ကိုတော့ အန္တရာယ်ရှိ တယ်ဆိုပြီး မှားယွင်းသည့်စွပ်စွဲမှုတွေရှိတယ် ဟု ဆိုရပေမည်။ ဓာတုဆေးဝါးအန္တရာယ်ထက် မိမိခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်းသာ အ ဓိကကျသည်။ အများကြားဖူးကြသည်။ နှစ်ချို့ ငရုတ်သီးတောင့်များတွင် ကင်ဆာဖြစ်စေ သည့်ငရုတ်သီးစေ့ (မှိုတက်များ) ပါဝင်သည်။ စားစရာများကို တစ်ခုခြင်းသုံးသပ်ရလျှင် မ ကျန်တော့သည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဖျော်ရည် များတွင်လည်း ချည်ဆိုးဆေးသုံးထားသည်။ နွားနို့တွင်ဖော်မလင်များပါဝင်သည်။ ပဲပြား တွေ၊ မုန့်ဟင်းခါးမုန့်ဖတ်တွေမှာ ဖော်မလင်ပါ သည်။ လမ်းဘေးတွင်ရောင်းချနေသည့် အ ကြော်များသည် ပလတ်စတစ်တွေထည့်ထား သည့် ဆီကိုအသုံးပြုကြော်ထားသည် အချဉ် များသည် ဆာလဖျုရစ်အက်ဆစ်များပါသည်။ ငှက်ပျောသီးကို အီသီဖွန်ဟုခေါ်သည့် ဆေး နှင့်မှည့်အောင်လုပ်ထားသည်၊ မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည်တွင် အချိုမုန့်တွေအများကြီးပါတယ်၊ အသုပ်စုံတွေလည်း ငရုတ်ဆီမကင်းကြဟုဆို ပါမည်။ ဒါဆိုဘာစားစရာရှိတော့မည်ဟု ဆို မည်။ သို့သော် ရေရှား၊ မီးရှားပြီးအချိန်ရှားပါး လာသည့်အချိန်တွင် အပြင်အစားအစာများကို စားသုံးသူများက အစားထိုးရတော့သည်။ ကလေးများသာမက လူကြီးများလည်းပါလာ သည်။ ပလတ်စတစ်ပါကင်ထုတ်ပိုးမှု လှလှ လေးများဖြစ်သည်။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ကနေဒါ နို်င်ငံ မွန်တရီရယ်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာဇီဝနည်းပညာကွန်ဖရင့်တွင် မည် သည့်တိုင်းပြည်တွင်မဆို အစားအစာသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်သည်ဟု ယူဆလျှင် ယင်းအစားအစာများကို သွင်းကုန်အဖြစ် မတင်သွင်းရ ဟုပထမအကြိမ်ပြဌာန်းထား သော အပြည်ပြည်ဆိုင််ရာဥပဒေကို သတိပြုရ ပေမည်။ အစားအစာများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင် ငံအတွင်းအတွေ့အကြုံမရှိသေးလျှင်လည်း နောင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် အဖွဲ့အစည်းများက စားသုံးသူ စောင့်ရှောက်ရေး ကဏ္ဍတစ်ရပ်ကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားရပေမည်။ အမျိုးသားအဆင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အစားအစာကိစ္စမှာ ကျယ်ဝန်း ရှုပ်ထွေးလှသည်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော မည်သည့်တိုင်းပြည်မဆို အစားအသောက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချမှုရရှိရေးကို အစိုးရ သာမက လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပြီးကြီး ကြပ်လေ့ရှိသည်။
အစားအသောက် အန္တရာယ်ကင်းဝေးရေး၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ရေး၊ အရေးအနှော အဖြစ်ပိုးဝင်ရောက်မလာစေရေး၊ အဆိပ်အ တောက်ကင်းစင်ရေး၊ ပိုးသတ်ဆေးကင်းစင် ရေးတို့အတွက် ခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့် တီထွင်ဖန်တီးထားသည့် အစားအသောက် ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကို အမြဲတစေ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေးသင့်ပေသည်။
အချဉ်ပေါင်းထုပ်၊ ရေခဲချောင်း၊ ပုဇွန်ချဉ်၊ နှမ်းဖတ်ချဉ်၊ မျှစ်၊ ငရုတ်သီးမှုန့် စသည့် ကုန် ပစ္စည်းများကို ရောင်း၍ လှအောင် အရောင်ဆိုး သည့် ပစ္စည်းများဖြစ်သဖြင့် ကင်ဆာအားပေး ပစ္စည်းများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ တာရှည်ခံအောင်ထည့်ထားသည့် ပစ္စည်းများ ကိုလည်း အထူးသတိပြုရမည်။ ယင်းပစ္စည်း များရောင်းချရာတွင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ ပေါ်တွင် တာရှည်ခံပစ္စည်းများထည့်ထားသည် ကိုလည်း စားသုံးသူများသိရှိအောင် တိတိကျ ကျဖော်ပြပေးရန်လိုသည်။ ယင်းသို့ဖော်ပြခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း စောင့်ကြပ်စိစစ်ပေးရမည်ဖြစ် သည်။ လိုအပ်သလို တားဆီးမှုများ ပြုလုပ်ပေး ရမည်။ ထုတ်လုပ်သူများ၏ နည်းပရိယာယ် များကို သိရှိပြီး စားသုံးသူများဘက်မှ တန်ပြန် အရေးယူမှု အရေးဆိုနိုင်ရန်အခွင့်အရေးများ ကို ဥပဒေများတွင် ဖော်ပြထားရမည်ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်စားသုံးနေသည့် အစားအစာများ တွင် ဓါတုပစ္စည်းများပါဝင်တတ်သည်။ ယင်း ပစ္စည်းများကို အားလုံးစစ်ဆေးရန်မှာ မပြီးစီး နိုင်သဖြင့် မစစ်ဆေးသည့် ပစ္စည်းများ ဖြစ်နေ သည်။ အထူးသဖြင့် အစားအစာများတွင် ကင် ဆာရောဂါအားပေးသည့် ပစ္စည်းများ များစွာပါ ရှိနေသည်ကို စားသုံးသူများ သတိထားသင့် သည်။ စားသုံးသူများ၏အခွင့်အရေးတွင် စား သုံးသူအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသည် ကဏ္ဍ တစ်ခုဖြင့်ပါဝင်နေသည်။ ဖော်ပြရလျှင် (၁) ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ကုန်စည်နှင့် အစားအ သောက်များမှ ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် လုံခြုံစိတ်ချ ရခွင့်၊ (၂) ဝယ်ယူစားသုံးသူများသည် ကုန် စည်များ၊ အစားအသောက်များနှင့် ပတ်သက် သည့်အမှတ်တံဆိပ်ကြော်ငြာများလွဲမှားစွာ ဖော်ပြနေခြင််းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် သတင်းအ ချက်အလက်များရရှိစေရေးတွင် အလေးထား လုပ်ဆောင်ရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို ရယူနိုင် ခွင့်၊ (၃) ကုန်ပစ္စည်း၏ စျေးနှုန်း၊ အရည်အ သွေး၊ ဝန်ဆောင်မှုများအမျိုးမျိုးပေးရာတွင် ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ အပေါ်ရွေးချယ်နိုင် ခွင့်၊ (၄) မြန်ဆန်ထိရောက်သော အုပ်ချုပ်ရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဥပဒေရေးရာများ ပြုစုပြဌာန်းပေးထားခြင်းဖြင့် စားသုံးသူများအ တွက် အသိပညာနယ်ပယ် အာမခံချက်ရရှိရေး အသိအမြင်ကြွယ်ဝစေရန် အခွင့်အရေးရရှိခွင့် တို့ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများကို ဩဂုတ်လ ၉ ရက်တွင် ကြေညာမည်
ုလှိုင် . ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများကို လာမည့် ဩဂုတ်လ ၉ ရက်တွင် ထုတ်ပြ န်ကြေညာ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်...
သိန္နီတွင် ကားပေါ်၌ သိုဝှက် သယ်ဆောင်လာသည့် လက်နက်များအား ပိုင်ရှင်မဲ့ ဖမ်းမိ
မင်းဇော်မင်း . ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ သိန္နီမြို့နယ်တွင် ကားပေါ်၌ သိုဝှက် သယ်ဆောင်လာသည့် လက်နက်များအား ဩဂုတ်လ ၃ ရက် က ပိုင်ရှင်မ...
ကညနရုံးတွင် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာ၌ ကြန့်ကြာမှုများ ရှိနေပြီး ပွဲစားများဖြင့် ပြုလုပ်မှသာ အဆင်ပြေ
ဆရာ ယဉ်မင်းအောင် . ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်မှ ဩဂုတ်လ ၃ ရက် အထိ . တနင်္ဂနွေ . အလုပ်အကိုင်သစ်များ ပေါ်ပေါက်ခြင်း၊ လု...
တောင်ကြီးတွင် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းကျော် တန်ဖိုးရှိ စိန်၊ ရွှေထည်နှင့် ကျောက်များ ခိုးယူခံရ
စုလှိုင် . ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကံကြီးရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၃)၊ အောင်မြေလမ်း၊ အမှတ်(၂၂၈)ရှိ ဦးသန်းအောင်၏ နေအိမ်တွင် ဩဂုတ်လ ၃ ရက်က ...
Archive Aug 11 (12) Aug 10 (10) Aug 09 (16) Aug 08 (11) Aug 07 (8) Aug 06 (12) Aug 05 (16) Aug 04 (13) Aug 03 (9) Aug 02 (6) Aug 01 (11) Jul 31 (8) Jul 30 (10) Jul 29 (11) Jul 28 (13) Jul 27 (12) Jul 26 (15) Jul 25 (13) Jul 24 (14) Jul 23 (11) Jul 22 (12) Jul 21 (12) Jul 20 (12) Jul 19 (8) Jul 18 (9) Jul 17 (9) Jul 16 (7) Jul 15 (16) Jul 14 (9) Jul 13 (13) Jul 12 (8) Jul 11 (9) Jul 10 (14) Jul 09 (13) Jul 08 (16) Jul 07 (12) Jul 06 (12) Jul 05 (10) Jul 04 (11) Jul 03 (10) Jul 02 (17) Jul 01 (16) Jun 30 (12) Jun 29 (14) Jun 28 (9) Jun 27 (10) Jun 26 (8) Jun 25 (12) Jun 24 (13) Jun 23 (19) Jun 22 (7) Jun 21 (14) Jun 20 (10) Jun 19 (16) Jun 18 (11) Jun 17 (14) Jun 16 (12) Jun 15 (10) Jun 14 (10) Jun 13 (9) Jun 12 (8) Jun 11 (10) Jun 10 (14) Jun 09 (13) Jun 08 (10) Jun 07 (6) Jun 05 (15) Jun 04 (10) Jun 03 (9) Jun 02 (10) Jun 01 (8) May 31 (11) May 30 (11) May 29 (12) May 28 (10) May 27 (15) May 26 (10) May 25 (16) May 24 (7) May 23 (17) May 22 (6) May 21 (8) May 20 (4) May 19 (13) May 18 (13) May 17 (15) May 16 (16) May 15 (12) May 14 (9) May 13 (9) May 12 (12) May 11 (12) May 10 (9) May 09 (12) May 08 (12) May 07 (16) May 06 (11) May 05 (11) May 04 (8) May 03 (14) May 02 (12) May 01 (13) Apr 30 (8) Apr 29 (13) Apr 28 (12) Apr 27 (10) Apr 26 (9) Apr 25 (8) Apr 24 (20) Apr 23 (10) Apr 22 (6) Apr 21 (11) Apr 20 (14) Apr 19 (17) Apr 18 (9) Apr 17 (12) Apr 16 (11) Apr 15 (11) Apr 14 (14) Apr 13 (17) Apr 12 (13) Apr 11 (16) Apr 10 (12) Apr 09 (8) Apr 08 (11) Apr 07 (11) Apr 06 (11) Apr 05 (4) Apr 04 (12) Apr 03 (9) Apr 02 (9) Apr 01 (11) Mar 31 (16) Mar 30 (15) Mar 29 (14) Mar 28 (15) Mar 27 (18) Mar 26 (17) Mar 25 (12) Mar 24 (13) Mar 23 (10) Mar 22 (8) Mar 21 (10) Mar 20 (13) Mar 19 (13) Mar 18 (9) Mar 17 (13) Mar 16 (9) Mar 15 (9) Mar 14 (7) Mar 13 (11) Mar 12 (14) Mar 11 (5) Mar 10 (8) Mar 09 (9) Mar 08 (7) Mar 07 (7) Mar 06 (15) Mar 05 (10) Mar 04 (6) Mar 03 (5) Mar 02 (8) Mar 01 (8) Feb 29 (5) Feb 28 (9) Feb 27 (10) Feb 26 (7) Feb 25 (9) Feb 24 (10) Feb 23 (4) Feb 22 (8) Feb 21 (9) Feb 20 (10) Feb 19 (9) Feb 18 (8) Feb 17 (7) Feb 16 (7) Feb 15 (11) Feb 14 (8) Feb 13 (15) Feb 12 (1) Feb 11 (7) Feb 10 (12) Feb 09 (7) Feb 08 (3) Feb 07 (9) Feb 06 (9) Feb 05 (13) Feb 04 (4) Feb 03 (7) Feb 02 (12) Feb 01 (9) Jan 31 (10) Jan 30 (9) Jan 29 (11) Jan 28 (9) Jan 27 (8) Jan 26 (8) Jan 25 (5) Jan 24 (10) Jan 23 (11) Jan 22 (11) Jan 21 (11) Jan 20 (8) Jan 19 (6) Jan 18 (4) Jan 17 (5) Jan 16 (16) Jan 15 (11) Jan 14 (10) Jan 13 (10) Jan 12 (6) Jan 11 (8) Jan 10 (3) Jan 09 (6) Jan 08 (11) Jan 07 (2) Jan 06 (7) Jan 05 (8) Jan 04 (10) Jan 03 (10) Jan 02 (12) Jan 01 (11) Dec 31 (4) Dec 30 (8) Dec 29 (6) Dec 28 (10) Dec 27 (6) Dec 26 (11) Dec 25 (9) Dec 24 (7) Dec 23 (5) Dec 22 (4) Dec 21 (7) Dec 20 (10) Dec 19 (12) Dec 18 (6) Dec 17 (3) Dec 16 (11) Dec 15 (11) Dec 14 (12) Dec 13 (10) Dec 12 (1) Dec 11 (8) Dec 10 (6) Dec 09 (4) Dec 08 (6) Dec 07 (7) Dec 06 (11) Dec 05 (11) Dec 04 (9) Dec 03 (7) Dec 02 (5) Dec 01 (4) Nov 30 (7) Nov 29 (10) Nov 28 (9) Nov 27 (7) Nov 26 (6) Nov 25 (5) Nov 24 (7) Nov 23 (6) Nov 22 (8) Nov 21 (8) Nov 20 (7) Nov 19 (3) Nov 18 (5) Nov 17 (7) Nov 16 (6) Nov 15 (5) Nov 14 (6) Nov 13 (6) Nov 11 (1) Nov 10 (1) Nov 09 (6) Nov 08 (8) Nov 07 (4) Nov 06 (4) Nov 05 (3) Nov 04 (4) Nov 03 (5) Nov 02 (2) Nov 01 (5) Oct 31 (7) Oct 30 (6) Oct 29 (4) Oct 28 (3) Oct 27 (8) Oct 26 (4) Oct 25 (5) Oct 24 (13) Oct 23 (6) Oct 22 (7) Oct 21 (1) Oct 20 (7) Oct 19 (6) Oct 18 (9) Oct 17 (5) Oct 16 (5) Oct 15 (2) Oct 14 (6) Oct 13 (9) Oct 12 (3) Oct 11 (7) Oct 10 (7) Oct 09 (11) Oct 08 (7) Oct 07 (6) Oct 06 (2) Oct 05 (9) Oct 04 (5) Oct 03 (14) Oct 02 (8) Oct 01 (9) Sep 30 (4) Sep 29 (8) Sep 28 (8) Sep 27 (8) Sep 25 (15) Sep 24 (9) Sep 23 (3) Sep 22 (6) Sep 21 (10) Sep 20 (10) Sep 19 (9) Sep 18 (10) Sep 17 (7) Sep 16 (5) Sep 15 (7) Sep 14 (10) Sep 13 (8) Sep 12 (10) Sep 11 (10) Sep 10 (9) Sep 09 (5) Sep 08 (9) Sep 07 (7) Sep 06 (8) Sep 05 (12) Sep 04 (11) Sep 03 (8) Sep 02 (4) Sep 01 (4) Aug 31 (8) Aug 30 (9) Aug 29 (12) Aug 28 (11) Aug 27 (8) Aug 26 (9) Aug 25 (8) Aug 24 (9) Aug 23 (9) Aug 22 (15) Aug 21 (7) Aug 20 (6) Aug 19 (6) Aug 18 (13) Aug 17 (8) Aug 16 (11) Aug 15 (2) Aug 14 (7) Aug 13 (4) Aug 12 (8) Aug 11 (7) Aug 10 (9) Aug 09 (7) Aug 08 (10) Aug 07 (9) Aug 06 (5) Aug 05 (8) Aug 04 (8) Aug 03 (7) Aug 02 (12) Aug 01 (15) Jul 31 (6) Jul 30 (12) Jul 29 (6) Jul 28 (11) Jul 27 (10) Jul 26 (13) Jul 25 (13) Jul 24 (11) Jul 23 (9) Jul 22 (5) Jul 21 (14) Jul 20 (15) Jul 19 (11) Jul 18 (8) Jul 17 (9) Jul 16 (9) Jul 15 (10) Jul 14 (12) Jul 13 (11) Jul 12 (13) Jul 11 (13) Jul 10 (6) Jul 09 (3) Jul 08 (4) Jul 07 (6) Jul 06 (8) Jul 05 (7) Jul 04 (4) Jul 03 (5) Jul 02 (3) Jul 01 (2) Jun 28 (3) Jun 27 (8) Jun 26 (5) Jun 25 (6) Jun 24 (4) Jun 23 (5) Jun 22 (2) Jun 21 (6) Jun 20 (10) Jun 19 (8) Jun 18 (10) Jun 17 (2) Jun 15 (6) Jun 14 (2) Jun 13 (4) Jun 12 (5) Jun 11 (3) Jun 10 (4) Jun 08 (5) Jun 07 (7) Jun 06 (5) Jun 05 (3) Jun 04 (3) Jun 03 (5) Jun 02 (3) May 31 (4) May 30 (10) May 29 (8) May 28 (7) May 27 (2) May 26 (1) May 25 (5) May 24 (5) May 23 (7) May 22 (6) May 21 (5) May 19 (4) May 18 (13) May 17 (3) May 16 (9) May 15 (10) May 14 (7) May 13 (6) May 12 (5) May 11 (7) May 10 (1) May 09 (5) May 08 (3) May 07 (5) May 06 (5) May 05 (6) May 04 (4) May 03 (3) May 02 (9) May 01 (9) Apr 30 (7) Apr 29 (7) Apr 28 (3) Apr 27 (7) Apr 26 (9) Apr 25 (10) Apr 24 (7) Apr 23 (1) Apr 22 (8) Apr 21 (4) Apr 20 (3) Apr 19 (4) Apr 18 (7) Apr 17 (7) Apr 15 (6) Apr 14 (2) Apr 13 (5) Apr 12 (5) Apr 11 (8) Apr 10 (7) Apr 09 (5) Apr 08 (6) Apr 07 (1) Apr 06 (7) Apr 05 (6) Apr 04 (9) Apr 03 (6) Apr 02 (8) Mar 31 (6) Mar 30 (5) Mar 29 (7) Mar 28 (8) Mar 27 (7) Mar 26 (11) Mar 25 (6) Mar 24 (4) Mar 23 (9) Mar 22 (4) Mar 21 (4) Mar 20 (9) Mar 19 (9) Mar 18 (6) Mar 17 (4) Mar 16 (5) Mar 15 (12) Mar 14 (11) Mar 13 (8) Mar 12 (5) Mar 11 (10) Mar 10 (4) Mar 09 (11) Mar 08 (8) Mar 07 (13) Mar 06 (3) Mar 05 (4) Mar 04 (6) Mar 03 (1) Mar 02 (2) Mar 01 (10) Feb 28 (11) Feb 26 (5) Feb 25 (5) Feb 24 (11) Feb 23 (2) Feb 22 (9) Feb 21 (4) Feb 20 (4) Feb 19 (4) Feb 18 (3) Feb 17 (7) Feb 16 (11) Feb 15 (5) Feb 14 (8) Feb 13 (12) Feb 12 (8) Feb 11 (8) Feb 10 (1) Feb 09 (8) Feb 08 (9) Feb 07 (10) Feb 06 (11) Feb 05 (7) Feb 04 (8) Feb 03 (4) Feb 02 (9) Feb 01 (6) Jan 31 (8) Jan 30 (6) Jan 29 (4) Jan 28 (6) Jan 27 (5) Jan 26 (6) Jan 25 (6) Jan 24 (14) Jan 23 (9) Jan 22 (7) Jan 21 (5) Jan 20 (6) Jan 19 (12) Jan 18 (9) Jan 17 (10) Jan 16 (6) Jan 15 (5) Jan 14 (6) Jan 13 (4) Jan 12 (5) Jan 11 (9) Jan 10 (10) Jan 09 (6) Jan 08 (6) Jan 07 (7) Jan 06 (6) Jan 05 (7) Jan 04 (8) Jan 03 (12) Jan 02 (11) Dec 31 (13) Dec 30 (8) Dec 29 (10) Dec 28 (7) Dec 27 (11) Dec 26 (3) Dec 25 (10) Dec 24 (14) Dec 23 (5) Dec 22 (7) Dec 21 (7) Dec 20 (9) Dec 19 (7) Dec 18 (5) Dec 17 (7) Dec 16 (3) Dec 15 (6) Dec 14 (12) Dec 13 (10) Dec 12 (7) Dec 11 (17) Dec 10 (12) Dec 09 (5) Dec 08 (6) Dec 07 (10) Dec 06 (14) Dec 05 (8) Dec 04 (5) Dec 03 (10) Dec 02 (6) Dec 01 (11) Nov 30 (10) Nov 29 (8) Nov 28 (12) Nov 27 (2) Nov 26 (8) Nov 25 (5) Nov 24 (5) Nov 23 (4) Nov 22 (1) Nov 21 (18) Nov 20 (10) Nov 19 (8) Nov 18 (2) Nov 17 (8) Nov 16 (17) Nov 15 (11) Nov 14 (5) Nov 13 (2) Nov 12 (3) Nov 11 (9) Nov 10 (15) Nov 09 (12) Nov 08 (5) Nov 07 (3) Nov 06 (5) Nov 05 (6) Nov 04 (2) Nov 03 (8) Nov 02 (7) Nov 01 (8) Oct 30 (9) Oct 29 (10) Oct 28 (7) Oct 27 (8) Oct 26 (10) Oct 25 (3) Oct 24 (5) Oct 23 (8) Oct 22 (6) Oct 21 (3) Oct 20 (5) Oct 19 (4) Oct 18 (12) Oct 17 (5) Oct 16 (11) Oct 15 (8) Oct 14 (5) Oct 13 (10) Oct 12 (12) Oct 11 (13) Oct 10 (3) Oct 09 (7) Oct 08 (5) Oct 07 (4) Oct 06 (3) Oct 05 (6) Oct 04 (16) Oct 03 (4) Oct 02 (6) Oct 01 (6) Sep 30 (2) Sep 29 (8) Sep 28 (8) Sep 27 (8) Sep 26 (9) Sep 25 (9) Sep 24 (6) Sep 23 (4) Sep 22 (10) Sep 21 (4) Sep 20 (5) Sep 19 (14) Sep 18 (13) Sep 17 (10) Sep 15 (1) Sep 14 (9) Sep 13 (1) Sep 12 (9) Sep 11 (5) Sep 10 (6) Sep 09 (5) Sep 08 (6) Sep 07 (8) Sep 06 (8) Sep 05 (6) Sep 04 (8) Sep 03 (10) Sep 02 (4) Sep 01 (7) Aug 31 (11) Aug 30 (9) Aug 29 (11) Aug 28 (4) Aug 27 (7) Aug 26 (4) Aug 25 (6) Aug 24 (7) Aug 23 (10) Aug 22 (10) Aug 21 (8) Aug 20 (6) Aug 19 (8) Aug 18 (9) Aug 17 (16) Aug 16 (10) Aug 15 (1) Aug 14 (9) Aug 13 (6) Aug 12 (5) Aug 11 (12) Aug 10 (13) Aug 09 (16) Aug 08 (6) Aug 07 (9) Aug 06 (5) Aug 05 (9) Aug 04 (13) Aug 03 (11) Aug 02 (15) Aug 01 (8) Jul 31 (7) Jul 30 (3) Jul 29 (8) Jul 28 (12) Jul 27 (10) Jul 26 (14) Jul 25 (7) Jul 24 (5) Jul 23 (7) Jul 22 (5) Jul 21 (12) Jul 20 (12) Jul 19 (5) Jul 18 (6) Jul 17 (4) Jul 16 (9) Jul 15 (1) Jul 14 (3) Jul 13 (5) Jul 12 (13) Jul 11 (6) Jul 10 (5) Jul 09 (10) Jul 08 (3) Jul 07 (13) Jul 06 (12) Jul 05 (13) Jul 03 (12) Jul 02 (5) Jun 30 (11) Jun 29 (9) Jun 28 (13) Jun 27 (2) Jun 26 (1) Jun 25 (7) Jun 24 (6) Jun 23 (12) Jun 22 (12) Jun 21 (15) Jun 20 (6) Jun 19 (3) Jun 18 (10) Jun 17 (4) Jun 16 (5) Jun 15 (8) Jun 14 (12) Jun 13 (9) Jun 12 (4) Jun 11 (8) Jun 10 (4) Jun 09 (7) Jun 08 (17) Jun 07 (13) Jun 06 (9) Jun 05 (8) Jun 04 (5) Jun 03 (5) Jun 02 (6) Jun 01 (10) May 31 (6) May 30 (4) May 28 (13) May 26 (7) May 25 (3) May 24 (8) May 23 (8) May 22 (10) May 21 (6) May 20 (6) May 19 (6) May 18 (7) May 17 (16) May 16 (8) May 15 (10) May 14 (10) May 13 (7) May 12 (7) May 11 (6) May 10 (15) May 09 (7) May 08 (11) May 07 (4) May 06 (5) May 05 (4) May 04 (6) May 03 (13) May 02 (5) May 01 (5) Apr 30 (19) Apr 29 (4) Apr 28 (8) Apr 27 (8) Apr 26 (14) Apr 25 (6) Apr 24 (11) Apr 23 (9) Apr 22 (3) Apr 21 (4) Apr 20 (7) Apr 19 (9) Apr 17 (5) Apr 16 (1) Apr 14 (3) Apr 13 (7) Apr 12 (11) Apr 11 (6) Apr 10 (10) Apr 09 (5) Apr 08 (6) Apr 07 (7) Apr 06 (8) Apr 05 (11) Apr 04 (11) Apr 03 (9) Apr 02 (7) Apr 01 (6) Mar 31 (8) Mar 30 (11) Mar 29 (8) Mar 28 (11) Mar 27 (9) Mar 26 (8) Mar 25 (6) Mar 24 (8) Mar 23 (15) Mar 22 (8) Mar 21 (7) Mar 20 (11) Mar 19 (11) Mar 18 (5) Mar 17 (9) Mar 16 (15) Mar 15 (12) Mar 14 (10) Mar 13 (15) Mar 12 (8) Mar 11 (5) Mar 10 (13) Mar 09 (6) Mar 08 (13) Mar 07 (10) Mar 06 (11) Mar 05 (9) Mar 04 (8) Mar 03 (9) Mar 01 (6) Feb 28 (11) Feb 27 (15) Feb 26 (14) Feb 25 (4) Feb 24 (10) Feb 23 (9) Feb 22 (14) Feb 21 (11) Feb 20 (16) Feb 19 (11) Feb 18 (6) Feb 17 (10) Feb 16 (13) Feb 15 (14) Feb 14 (9) Feb 13 (12) Feb 12 (11) Feb 11 (7) Feb 10 (8) Feb 09 (10) Feb 08 (15) Feb 07 (11) Feb 06 (6) Feb 05 (5) Feb 04 (6) Feb 03 (4) Feb 02 (7) Feb 01 (10) Jan 31 (9) Jan 30 (4) Jan 29 (8) Jan 27 (10) Jan 26 (11) Jan 25 (9) Jan 24 (7) Jan 23 (9) Jan 22 (8) Jan 21 (5) Jan 20 (8) Jan 19 (6) Jan 18 (10) Jan 17 (10) Jan 16 (6) Jan 15 (15) Jan 14 (8) Jan 13 (6) Jan 12 (10) Jan 11 (11) Jan 10 (13) Jan 09 (9) Jan 08 (1) Jan 07 (5) Jan 06 (8) Jan 05 (9) Jan 04 (8) Jan 03 (8) Jan 02 (5) Jan 01 (8) Dec 31 (3) Dec 30 (4) Dec 29 (5) Dec 28 (4) Dec 27 (4) Dec 26 (6) Dec 25 (7) Dec 24 (4) Dec 23 (5) Dec 22 (10) Dec 21 (10) Dec 20 (6) Dec 19 (7) Dec 18 (8) Dec 17 (3) Dec 16 (9) Dec 15 (8) Dec 14 (10) Dec 13 (6) Dec 12 (10) Dec 11 (6) Dec 10 (7) Dec 09 (3) Dec 08 (5) Dec 07 (12) Dec 06 (10) Dec 05 (11) Dec 04 (6) Dec 03 (4) Dec 02 (9) Dec 01 (7) Nov 30 (9) Nov 29 (6) Nov 28 (5) Nov 27 (8) Nov 26 (6) Nov 25 (6) Nov 24 (10) Nov 23 (8) Nov 22 (10) Nov 21 (10) Nov 20 (7) Nov 19 (5) Nov 18 (7) Nov 17 (8) Nov 16 (14) Nov 15 (8) Nov 14 (9) Nov 13 (10) Nov 12 (7) Nov 11 (7) Nov 10 (10) Nov 09 (9) Nov 08 (7) Nov 07 (7) Nov 06 (6) Nov 05 (4) Nov 04 (6) Nov 03 (8) Nov 02 (8) Nov 01 (8) Oct 31 (7) Oct 30 (5) Oct 29 (6) Oct 28 (6) Oct 27 (8) Oct 26 (11) Oct 25 (7) Oct 24 (4) Oct 23 (8) Oct 22 (6) Oct 21 (8) Oct 20 (8) Oct 19 (5) Oct 18 (5) Oct 17 (4) Oct 16 (7) Oct 15 (5) Oct 14 (4) Oct 13 (5) Oct 12 (10) Oct 11 (9) Oct 10 (5) Oct 09 (1) Oct 08 (5) Oct 07 (7) Oct 06 (6) Oct 05 (7) Oct 04 (5) Oct 03 (6) Oct 02 (5) Oct 01 (6) Sep 30 (4) Sep 29 (5) Sep 28 (1) Sep 27 (5) Sep 26 (11) Sep 25 (6) Sep 24 (4) Sep 23 (8) Sep 22 (6) Sep 21 (5) Sep 20 (6) Sep 19 (5) Sep 18 (9) Sep 17 (8) Sep 16 (6) Sep 15 (7) Sep 14 (9) Sep 13 (9) Sep 12 (10) Sep 11 (9) Sep 10 (5) Sep 09 (8) Sep 08 (10) Sep 07 (8) Sep 06 (10) Sep 05 (4) Sep 04 (10) Sep 03 (7) Sep 02 (7) Sep 01 (7) Aug 31 (11) Aug 30 (8) Aug 29 (9) Aug 28 (10) Aug 27 (5) Aug 26 (3) Aug 25 (8) Aug 24 (8) Aug 23 (9) Aug 22 (8) Aug 21 (12) Aug 20 (8) Aug 19 (8) Aug 18 (10) Aug 17 (10) Aug 16 (10) Aug 15 (10) Aug 14 (12) Aug 13 (9) Aug 12 (9) Aug 11 (10) Aug 10 (13) Aug 09 (9) Aug 08 (13) Aug 07 (13) Aug 06 (3) Aug 05 (12) Aug 04 (11) Aug 03 (11) Aug 02 (10) Aug 01 (11) Jul 31 (11) Jul 30 (7) Jul 29 (9) Jul 28 (9) Jul 27 (10) Jul 26 (8) Jul 25 (10) Jul 24 (7) Jul 23 (6) Jul 22 (8) Jul 21 (10) Jul 20 (12) Jul 19 (6) Jul 18 (6) Jul 17 (8) Jul 16 (7) Jul 15 (10) Jul 14 (11) Jul 13 (12) Jul 12 (10) Jul 11 (8) Jul 10 (13) Jul 09 (1) Jul 08 (11) Jul 07 (9) Jul 06 (12) Jul 05 (9) Jul 04 (8) Jul 03 (7) Jul 02 (7) Jul 01 (7) Jun 30 (6) Jun 29 (8) Jun 28 (7) Jun 27 (11) Jun 26 (10) Jun 25 (10) Jun 24 (9) Jun 23 (13) Jun 22 (9) Jun 21 (9) Jun 20 (9) Jun 19 (10) Jun 18 (5) Jun 17 (12) Jun 16 (11) Jun 15 (14) Jun 14 (9) Jun 13 (13) Jun 12 (14) Jun 11 (10) Jun 10 (14) Jun 09 (10) Jun 08 (17) Jun 07 (10) Jun 06 (15) Jun 05 (11) Jun 04 (9) Jun 03 (11) Jun 02 (10) Jun 01 (16) May 31 (14) May 30 (13) May 29 (14) May 28 (9) May 27 (18) May 26 (16) May 25 (24) May 24 (10) May 23 (9) May 22 (16) May 21 (8) May 20 (9) May 19 (9) May 18 (10) May 17 (13) May 16 (12) May 15 (10) May 14 (8) May 13 (5) May 12 (10) May 11 (10) May 10 (14) May 09 (10) May 08 (7) May 07 (12) May 06 (6) May 05 (11) May 04 (14) May 03 (3) May 02 (13) May 01 (16) Apr 30 (7) Apr 29 (11) Apr 28 (10) Apr 27 (8) Apr 26 (11) Apr 25 (9) Apr 24 (7) Apr 23 (5) Apr 22 (8) Apr 21 (7) Apr 20 (10) Apr 19 (11) Apr 18 (9) Apr 17 (3) Apr 16 (5) Apr 15 (6) Apr 14 (7) Apr 13 (6) Apr 12 (12) Apr 11 (12) Apr 10 (11) Apr 09 (12) Apr 08 (11) Apr 07 (14) Apr 06 (12) Apr 05 (12) Apr 04 (13) Apr 03 (13) Apr 02 (8) Apr 01 (4) Mar 31 (8) Mar 30 (9) Mar 29 (12) Mar 28 (14) Mar 27 (20) Mar 26 (7) Mar 25 (14) Mar 24 (13) Mar 23 (15) Mar 22 (18) Mar 21 (12) Mar 20 (9) Mar 19 (9) Mar 18 (12) Mar 17 (11) Mar 16 (14) Mar 15 (9) Mar 14 (15) Mar 13 (17) Mar 12 (10) Mar 11 (15) Mar 10 (9) Mar 09 (13) Mar 08 (12) Mar 07 (11) Mar 06 (16) Mar 05 (9) Mar 04 (8) Mar 03 (12) Mar 02 (10) Mar 01 (6) Feb 28 (2) Feb 27 (4) Feb 26 (7) Feb 25 (3) Feb 24 (5)